8-da Aaladood ee Cilmi-baarista ugu Wanaagsan (Bilaash ah) ee 2022 | Martech Zone
8-da Aaladood ee Cilmi-baarista Ereyga ugu Fiican (Bilaash ah) ee 2022
Jimco, Febraayo 18, 2022 Isniin, February 21, 2022 Aleh Barysevich
Erayada furaha ayaa had iyo jeer muhiim u ah SEO. Waxay u oggolaadaan makiinadaha raadinta inay fahmaan waxa ku saabsan waxa ku jira si ay ugu muujiyaan SERP su'aasha ku habboon. Haddii aadan haysan ereyo muhiim ah, boggaagu ma heli doono SERP kasta maadaama makiinadaha raadinta aysan awoodin inay fahmaan. Haddii aad haysatid qaar ka mid ah ereyada muhiimka ah ee khaldan, markaa boggagaaga waxaa loo soo bandhigi doonaa su'aalo aan khusayn, taas oo aan faa'iido u lahayn dhagaystayaashaada ama gujinshooyinkaaga. Taasi waa sababta ay tahay inaad si taxadar leh u doorato ereyada muhiimka ah oo aad doorato kuwa ugu fiican.
Su'aal wanaagsan ayaa ah sida loo helo ereyada muhiimka ah ee wanaagsan. Haddii aad u maleyneyso inay kugu kici doonto hanti, markaa waxaan halkaan u joogaa inaan kugu yaabiyo - cilmi-baarista ereyga muhiimka ah waxay noqon kartaa gabi ahaanba bilaash. Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa qalab bilaash ah si aad u hesho ereyo cusub oo cusub oo aanad waxba bixin. Aan bilowno.
Qorshaha Kelmadaha waa mid ka mid ah waxa loogu yeero bulukeeti-iyo-hoobiye aaladaha Google ee cilmi baarista ereyada muhiimka ah. Waxay si gaar ah u fiican tahay in la helo ereyada muhiimka ah ee ololaha xayaysiinta. Qalabku waa fududahay in la isticmaalo - waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa akoon Google Ads oo leh 2FA (wax qasab ah hadda). Oo halkan aynu tagnaa. Si aad ereyada muhiimka ah uga dhigto kuwo khuseeya, waxaad cayimi kartaa meelaha iyo luqadaha. Natiijooyinka sidoo kale waxaa laga yaabaa in la sifeeyo si meesha looga saaro raadinta calaamadeysan iyo soo jeedinta dadka waaweyn.
Sidaad u aragto, Qorsheeyaha Keyword Key wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qiimeyso ereyada muhiimka ah iyadoo loo eegayo tirada raadinta bilaha ah, qiimaha gujista, isbeddelka caannimada saddexda bilood, iyo wixii la mid ah. Shayga ayaa ah in ereyada muhiimka ah ee halkan laga helay aysan noqon doonin xalalka SEO ee ugu fiican, maadaama qalabku uu ku habboon yahay in la bixiyo, ma aha ololeyaal dabiici ah. Taas oo run ahaantii aad uga cad shaxda halbeegyada ereyga muhiimka ah ee hadda jira. Weli, Qorsheeyaha Keyword-ka waa bar bilow wanaagsan.
Kala Soco Darajo
Kala Soco Darajo by SEO PowerSuite waa software awood badan leh oo leh in ka badan 20 hab oo cilmi baadhiseed keyword hoostiisa, Google's Dadku sidoo kale way is weydiinayaan dhowr farsamooyin cilmi baaris tartan. Ugu dambeyntii, tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto kumanaan fikrado fure ah oo cusub dhammaan hal meel. Rank Tracker sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad baarto ereyada muhiimka ah ee khuseeya goobtaada iyo luqaddaada bartilmaameedka. Maaddaama ay caqli gal tahay in xogta laga soo ururiyay makiinadaha raadinta ee Maraykanka aysan sax u noqon doonin weydiimaha, dheh, Ruush ama Talyaani.
Rank Tracker sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhexgeliso Google Search Console iyo xisaabaadka Analytics oo dhab ahaantii aad haysato dhammaan xogtaada muhiimka ah hal meel.
Marka lagu daro ereyada muhiimka ah laftooda, Rank Tracker wuxuu leeyahay tiro badan oo cabbirro ah si uu kaaga caawiyo inaad qiimeyso waxtarka ereyada muhiimka ah, sida tirada raadinta bishiiba, adkaanta ereyga muhiimka ah, tartanka, taraafigga la qiyaasay, CPC, astaamaha SERP, iyo suuqgeyn kale oo badan iyo xuduudaha SEO. .
Sawirka hoose wuxuu muujinayaa cutubka Farqiga Keyword, kaasoo kuu ogolaanaya inaad hesho ereyada muhiimka ah ee tartamayaashaadu ay isticmaaleen.
Hal shay oo kale oo wanaagsan oo ku saabsan Rank Tracker waa in horumariyayaashooda ay dhagaystaan ​​waxa isticmaalayaashu u baahan yihiin. Tusaale ahaan, waxay dhawaan soo celiyeen tab-ka-dhigidda erayga Keyword:
Tabtani waxay kuu ogolaanaysaa inaad gujiso erey kasta oo muhiim ah oo isla markiiba hel boosaska SERP-10 ee ugu sarreeya oo ay la socdaan tayada tayada boggagan.
Rank Tracker sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku shaandhayso ereyadaada furaha nidaamkeeda cusub ee shaandhaynta oo aad abuurto khariidad ereyga muhiimka ah oo miisaankeedu dhan yahay. Tirada ereyada muhiimka ah, habka, waa aan xadidnayn.
Ka jawaab dadweynaha
Ka jawaab dadweynaha wax badan ayuu kaga duwan yahay agabka kale ee la midka ah hadday ahaan lahayd soo jeedinta iyo nooca natiijooyinka. Maaddaama curiyaha ereyga muhiimka ah uu ku shaqeeyo Google Autosuggest, dhammaan fikradaha laga helo ka jawaabida dadweynaha waa dhab su'aalaha la xiriira weydiintaada bilowga ah. Tani waxay ka dhigaysaa qalabku inuu si dhab ah u caawiyo markaad raadinayso ereyada muhiimka ah ee dabada dheer iyo fikradaha cusub ee nuxurka:
Su'aalaha ka sokow, qalabku waxa uu abuuraa weedho iyo isbarbardhigga la xidhiidha weydiinta abuurka. Wax walba waxaa lagu soo dejisan karaa qaab CSV ama sawir ahaan.
Generator Keyword Free
Keyword Generator waa wax soo saarka Ahrefs. Qalabkani waa mid aad u fudud in la isticmaalo - waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad geliso eraygaaga farcanka, dooro mashiinka raadinta iyo goobta, iyo voila! Keyword Generator waxa uu kugu soo dhawaynayaa fikrado cusub oo ereyada muhiimka ah iyo su'aalaha laxidhiidha oo wata dhawr qiyaasood sida tirada baadhitaanada, dhibka, iyo taariikhda cusboonaysiinta xogta ugu dambaysay.
Keyword Generator waxa uu soo saarayaa 100 ereyada muhiimka ah iyo 100 su'aalood fikrado bilaash ah. Si aad wax badan u aragto, waxaa lagu weydiin doonaa inaad iibsato shati.
Da' wanagsan Search tacsiyeeyaan kaliya ayaa ku tusi doona ereyada muhiimka ah ee aad hore ugu darajaysay Weli, waxaa jirta boos shaqo miro leh. Qalabkani waxa uu kaa caawin karaa in aad ogaato ereyada muhiimka ah ee aanad garanayn in aad darajada ku jirto, oo aad u hagaajiso boosaskooda. Si kale haddii loo dhigo, Console Search wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hesho ereyada muhiimka ah ee hoos u dhaca.
Erayada muhiimka ah ee aan shaqeynin waa ereyada muhiimka ah ee leh boosaska 10 ilaa 13. Kuma jiraan SERP-ga ugu horreeya laakiin waxay u baahan yihiin dadaal yar oo hagaajin ah si loo gaaro.
Console Search sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hubiso boggaga ugu sarreeya si aad ugu wanaajiso ereyada muhiimka ah ee liita, sidaas darteed waxay ku siinaysaa bar bilow wanaagsan oo cilmi baarista ereyga muhiimka ah iyo hagaajinta nuxurka.
Sidoo kale la Weydiiyay
Sidoo kale la Weydiiyay, sida aad ka qiyaasi karto magaca aaladda, waxay ka soo jiidataa xogta Google Dadku sidoo kale way is weydiinayaan sidaas darteed waxay kugu soo dhaweyneysaa fikrado kelmado muhiim ah oo cusub. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad gelisaa erayga muhiimka ah ee abuurkaaga oo aad qeexdo luqadda iyo gobolka. Qalabku wuxuu markaa samayn doonaa baaritaan wuxuuna soo bandhigi doonaa natiijooyinka sidii su'aalo la ururiyey.
Su'aalahani dhab ahaantii waa fikrado qoraal ah oo diyaar ah (ama xitaa cinwaanno). Waxa kaliya ee kaa dhigi kara inaad xanaaqdo waa inaad haysato 10 baaritaan bilaash ah bishii oo aanad u dhoofin karin xogta qaab kasta. Hagaag, sidee ku suurtagashay, waxaad weydiin kartaa. Jawaabtu waa Screenshots. Ma fududa fikrad wanaagsan in lagu daro sawirada shaashadda warbixinaha macaamiisha, laakiin waa dariiqa looga baxo baahiyaha gaarka ah. Isku soo wada duuboo, Sidoo kale la Weydiiyay waa abuure fikradeed nuxur wanaagsan, fikradaha ay bixiso waxay u fiicnaan kartaa labadaba blogyada iyo ololaha xayeysiiska.
Keyword Explorer waa mid ka mid ah qalabka lagu dhex dhisay MOZ. Tani waxay ka dhigan tahay inaad u baahan doonto xisaab MOZ si aad u isticmaasho qalabka. Taas oo runtii ah shay fudud. Algorithm waa mid fudud - waxaad u baahan tahay inaad geliso eraygaaga muhiimka ah, qeex gobolka iyo luqadda (waxay ku wada socdaan kiiskan), oo halkan waxaad joogtaa. Qalabku wuxuu la imaan doonaa go'an oo ah talooyinka muhiimka ah iyo natiijooyinka SERP ee ugu sarreeya ee weydiinta abuurka.
Markaad gujiso Eeg dhammaan talooyinka ee Soo jeedinta kelmad moduleka, qalabku wuxuu ku tusi doonaa 1000 fikrado muhiim ah oo cusub, markaa waxaad haysataa noocyo kala duwan oo aad ka dooran karto.
Marka loo eego jaangooyooyinka SEO, ma haysatid wax badan oo aad ku falanqeyso halkan - qalabku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad raadiso oo kaliya mugga iyo ku habboonaanta (isku-dhafka caanka ah iyo isku midka ah ee semantic ee ereyga muhiimka ah ee abuurka).
Sida sidoo kale Weydiisay, Keyword Explorer wuxuu ku siinayaa 10 baaritaan oo bilaash ah bishii. Haddii aad u baahan tahay xog dheeraad ah, waxaad u baahan doontaa inaad hesho akoon lacag ah.
Surword keyfer waa plugin bilaash ah oo ku shaqeeya Surfer-ka Chrome kaas, marka la rakibo, si toos ah u soo bandhigaya xogta ereyga muhiimka ah ee Google SERP markaad wax ka raadinayso.
Marka loo eego cabbirada SEO iyo PPC, Keyword Surfer wuxuu tusi doonaa kuwan soo socda: tirada bilaha ah ee raadinta iyo kharashyada gujinta weydiinta abuurka, mugga raadinta, iyo heerka isku midka ah ee soo jeedinta erayga muhiimka ah ee cusub. Tirada soo jeedintu way kala duwan tahay iyadoo loo eegayo (malaha?) ereyga caanka ah, maadaama aan helay 31 erey oo muhiim ah cunnada hindiya oo kaliya 10 loogu talagalay Gelato.
Qalabku si toos ah uguma beddelo goobta si waafaqsan luqadda weydiinta, laakiin waxaad xor u tahay inaad keligaa sheegto si aad u hesho xogta ku habboon.
Intaa waxaa dheer, qalabku wuxuu ku siin doonaa tirakoobka taraafikada ee boggaga SERP ee hadda jira iyo tirada saxda ah ee u dhigma ee ay haystaan.
Marka lagu daro falanqaynta ereyga muhiimka ah, qalabku wuxuu ku siinayaa inaad soo saarto maqaal maqaal ah oo ku salaysan weydiinta abuurka leh Surfer AI macnaheedu. Muuqaal fiican, kaas oo noqon kara bilow wanaagsan marka aad la shaqaynayso nuxurka. Weli, the tijaabi qalab sirdoon macmal ah waxay muujiyeen in dhammaantood ay aad uga dambeeyaan qorayaasha dhabta ah ee aadanaha.
Si aad u soo koobto
Sida aad arki karto, waxaad ka heli kartaa ereyada muhiimka ah bilaash. Natiijaduna waxay noqon doontaa mid degdeg ah, tayo fiican leh, iyo, waxa runtii muhiimka ah, guud ahaan. Dabcan, waxaa jira qalab badan oo bilaash ah iyo qalab loogu talagalay cilmi-baarista ereyga muhiimka ah, waxaan kaliya qaatay kuwa u muuqda kuwa ugu xiisaha badan oo waxtar leh. By habka, waa maxay qalabka aad jeceshahay? La wadaag faallooyinka.
Daah-: Martech Zone waxaa ku jira xiriirinta xiriirka ee maqaalkan.
Tags: aiayaa sidoo kale la weydiiyeyu jawaab shacabkasirdoonka macmalqalabyada SEO oo bilaash ahqalab bilaash ahgoogle autosuggestgoogle keyword qorsheeyekeywords googleraadinta google googleereyga adagraadiye muhiim ahdhaliye keywordcilmi-baarista muhiimka ahkeyword surferkeywords organicBixi halkii gujicilmi baarista ppcraadraaca darajadamugga raadintaSEOereyada muhiimka ahqalabka seosurfer ai